C005 : Noppakao Tea – ดีกว่าทิ้ง ชุมชนคนไม่ทิ้งของ DEE KWA THING
Home สินค้าราคาปลีก C005 : Noppakao Tea
C005 : Noppakao Tea
Noppakao Tea တန်းဖိုးရှိတဲ့သတင်းလေး..
🇹🇭Organic100% ဖြစ်လို့နိူင်ငံပေါင်း ၂၀ ကိုစတင်ဖြန့်ချီနေပြီး အာမခံချက်အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့တိုင်းရင်ဆေးတမျိုးပါ
🔖…Set အသေးကစတင်၍အကျိုးထူးသည်အထိအနည်းဆုံး ၁လနှင့်အထက်သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်
▪ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း Review များစွာကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဖော်ပြပါReview များဟာစားသုံးသူများမှ ပေးပို့ထားသောReview အမှန်များဖြစ်ပါတယ်!
ရောဂါပေါင်း 50 ကျော်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
လည်ပင်းကြီးရောဂါစတင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဆေးလဘ္ကက်ကို ၂လတိတိ ဆက်တိုက်သောက်ရုံမျှဖြင့်သက်သာစေပါတယ်
รหัสสินค้า: C005 หมวดหมู่: สินค้าราคาปลีก
Share "C005 : Noppakao Tea" on Facebook
Share "C005 : Noppakao Tea" on Google Plus
Pin "C005 : Noppakao Tea" on Pinterest
1.ระยะเวลาการจัดส่ง สินค้าส่งถึงมือลูกค้าภายใน7วันหลังจากได้รับการโอนชำระเงิน
1.ပို့ဆောင်ရာတွင်ကြာမြင့်ချိ်န် – ငွေလွှဲပြီး ၇ ရက်အတွင်းပစ္စည်းပို့ရရှိပါမည်။
2.วิธีการขนส่ง ส่งถึงมือลูกค้าในเมืองย่างกุ้งโดย Delivery Boy (กรณีนอกเมืองหรือต่างเมืองสินค้าจะถูกจัดส่งให้ที่ท่ารถตามเมืองต่างฯ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งปลายทางเอง)
2.ပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်း – ရန်ကုန်မြို့တွင်း Delivery ဖြင့်အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ခြင်း (နယ်များကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ကားဂိတ်များသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း တန်ဆာခကို ဝယ်သူဘက်မှပစ္စည်းယူသည့်ဂိတ်တွင်ကိုယ်တိုင်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
3.ကုန်ပစ္စည်းဈေးနူန်း – ကုန်ပစ္စည်းဈေးနူန်းများတွင် ရန်ကုန်အိမ်အရောက်ပို့ခနှင့်နယ်ကားဂိတ်ပို့ခပေါင်းထည့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
4.เงื่อนไขอื่นฯ สินค้ามีราคาส่ง สนใจเพื่อซื้อไปขายต่อ(โปรดคลิ๊ก!!)
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “C005 : Noppakao Tea” ยกเลิกการตอบ
B030 : Natur จุกนม Biomimic ฐานกว้าง ไซส์ M ( แพ็ค2ชิ้น )
SUN DERRA Thailand
C004 : SUN DERRA SILKY SUN SCREEN SPF 50 PA+++
C001 : สินค้า SUN DERRA Thailand
B023 : Natur เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้า รุ่น 8 นาที
B033 : Set หมอนหลุม หมอนข้าง
B027 : Natur จุกนม Biomimic ไซส์ M ( แพ็ค3ชิ้น )
B021 : NATUR เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้าพร้อมอบแห้ง รุ่น SD-3
Lovely Prince Kids
B032 : ผ้าคลุมให้นมบุตร
B022 : Natur เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้า รุ่น 10 นาที
B011 : เข็มขัดเซฟตี้ แบบครึ่งตัวตะขอใหญ่ รุ่น NP-737B Ks26,700.00
IT0006 :: คลิ๊ปหลัง วิทยุ ICOM รุ่น 80 FX
BT004 :: ETUDE
B003 : วิทยุสื่อสารยี่ห้อHytera รุ่น TF-318 (แพ็คคู่>ย่านความถี่245.000-245.9875 MHz) Ks74,000.00
IT0005 :: สายนำสัญญาณสำเร็จ 25 M